Ciyaar dhaqameedka Istunka oo sanado ka dib markii ugu horeysay lagu qabtay degmada Afgooye – idalenews.com
Ciyaar dhaqameedka Istunka oo sanado ka dib markii ugu horeysay lagu qabtay degmada Afgooye
Ku dhowaad afar sano ka dib aya waxaa shalay gelinkii dambe lagu qabtay garoonka kubada Cagta Sheel oo ku yaalla degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose ciyaar dhaqameedka caanka ah ee loo yaqaano Istunka taasoo sanadkiiba mar la qabto.
Musaabad ku saabsan dib u bilaabida ciyaar dhaqameedka Istunka ayaa waxaa lagu qabtay garoonka ciyaaraha Sheel ee degmada Afgooye, waxaana ka qeyb galay maamulka degmada Afgooye odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta degmadaas ka soo jeeda iyo dadweyne fara badan.
Waxaa kulankaas ka hadlay Cali Shiikh C/llaahi (Cali Afgooye) oo ka mid ahaa xildhibaanada Baarlamankii hore, kaasoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in degmadaas dib looga bilaabo sanado ka dib ciyaar dhaqameedka istunka oo uu sheegay iney tahay mid dadka degmadaas ay caan ku yihiin oo soo leh taariikh aad u fog.
Sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha degmada Afgooye ee dowlada Somalia C/llaahi Axmed Ibey oo sheegay in degmada Afgooye ay ka mid tahay meelaha xadaarada fog ku leh dhulka Soomaalida, ciyaar dhaqameedka istunkana uu ka jiray degaankaas ku dhowaad kun sanadood, waxaana sidoo kale goobtaas ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha beelaha degaanka.
Intaa ku dib ayaa waxaa garoonka Shell ee degmada Afgooye ka dhacay ciyaar dhaqameedka Istunka, waxaana ulo aan sidaa u weyneyn isla dhacay labo kooxood oo midiiba ay gaareyso boqolaal nin kuwaasoo fooda is daray ka dibna is garaacay, iyadoo odayaasha beelaha degaanku ay sheegeen in xiligii caadiga ahaa ee la qaban jiray ciyaarta istunka aan la weli la gaarin hase ahaatee ciyaartii shalay ay aheyd mid lagu muujinayey in ciyaartaasi ay weli jirto, dadkuna ay ku xasuusanayeen qaabkii ay u dhici jirtay ciyaarta Istunka.
Xoogaga Al-shabaab oo afartii sanadood ee ugu dmbeysay maamulayey degmada Afgooye ayaa mamnuucay qabashada ciyaartaasi oo ay sheegeen iney tahay mid khilaafsan shareecada Islaamka, taasoo keentay in mudadaas aan la xitaa la isku soo hadal qaadin qabashada ciyaar dhaqameedkaasi oo xiliyadii la qaban jiray ay degmada Afgooye iskugu tegi jireen kumamaan dadweyne oo isaga imanayey gobolada dalka qaarkood si ay u daawadaan ciyaar dhaqameedka istunka.
Afgooye oo lagu qabtay Dagaalyahaano shabaab ah oo dilal u geestay Ciidamada Dowladda
Ciidamada AMISOM oo dhaq dhaqaaqyo ciidan ka wada Gobolka Hiiraan